पार्टी भित्र र बाहिरका केही व्यक्तिहरु मविरुद्ध षड्यन्त्र गर्दैछन् : राजेन्द्र महतो
जनकपुरधाम, २० फागुन । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले आफू निश्चित समयमा नै पार्टी महाधिवेशन गराउने पक्षमा रहेकोले महाधिवेशन नचाहनेहरुले आफू विरुद्ध षडयन्त्रको जालो बुन्न थालेको आरोप लगाएका छन् ।
राजेन्द्र महतोको भ्रष्टाचारको साक्षी बन्न सक्दिँन : चौधरी
काठमाडौं, २० फागुन । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोको स्वकीय सचिव पदबाट राजीनामा दिएका रविन्द्र कुमार चौधरी (राजेश)ले विभिन्न किसिमका आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘जनताको कचहरी’ मा प्रदेश २ का कानूनमन्त्री
सिरहा, २० फागुन । प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले उत्पीडनमा परेका समुदायले न्यायको अनुभुति गर्ने गरी कानुनहरु बनाइरहेको बताएका छन् ।
राजेन्द्र महतोका स्वकीय सचिवद्वारा राजीनामा, आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप
काठमाडौं, १९ फागुन । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोका स्वकीय सचिव रविन्द्र कुमार चौधरी (राजेश)ले राजीनामा दिएका छन् ।
काठमाडौं, १९ फागुन । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका नेता भरतमोहन अधिकारीको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
परिवार दलको “राष्ट्र जागरण अभियान“ धनगढीबाट सुरु
धनगढी, १८ फागुन । नेपाल परिवार दलले राष्ट्रिय जागरण अभियान २०७५ को औपचारिक रुपमा सुरुवात गरेको छ ।
समाजको विकासका लागि छोरी शिक्षामा लगानी : वडाअध्यक्ष साह
रौतहट, १७ फागुन । निर्वाचित भएदेखि छोरीहरुको प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क रुपमा निजि स्रोतबाट दिँदै आएका गौर नगरपालिका वडा नं.१ का वडा अध्यक्ष भरत साहले निःशुल्क कम्प्युटर शिक्षाको पाचौं सत्र सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन लागेको देखेर आफु निकै उत्साहित रहेको बताएका छन् ।
‘प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी कपिलवस्तु हुनुपर्छ’
कपिलवस्तु, १५ फागुन । जिल्लाबासीले प्रदेश ५ को नाम लुम्विनी र राजधानी कपिलवस्तु हुनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रदेश ५ विशेष समितिले तौलिहवामा राखेको विचार तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा जिल्ला बासीले यस्तो बताएका हुन् ।
आतंकवाद विरुद्ध राजपाका भ्रातृ संगठनद्वारा प्रदर्शन
वीरगन्ज, १४ फागुन । भारतको पुलवामा बमकाण्ड विरुद्धमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका भ्रातृ संगठनहरुले विशाल विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
प्रदेश २ मा राजपाको विस्तारित बैठक सम्पन्न
जनकपुरधाम, १३ फागुन । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको चारदिने विस्तारित बैठक संयोजक महेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ ।
कांग्रेसको विधान पारित
काठमाडौं, १२ फागुन । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको विधान संशोधनको प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।
काठमाडौं, १२ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रविधि र यान्त्रिकीकरणको प्रयोग गरेर कृषिमा निर्भर जनसंख्यालाई घटाउनु पर्ने बताएका छन् ।
कांग्रेसले सरकारलाई कमजोर देखाउन प्रयास गरिरहेको छ : खनाल
सुनसरी, १२ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई कमजोर देखाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।
‘राजनीतिक अधिकारका लागि बलिदानी गर्नुपर्ने समय सकियो’
काठमाडौं, १२ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक अधिकारका लागि बलिदानी गर्नुपर्ने समय सकिएको बताएका छन् ।
पहिचान विरोधीहरूलाई टेवा दिनु सर्पलाई दुध ख्वाउनुजस्तै हो : सहअध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं, ११ फागुन । संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १३ को प्रथम वडा अधिवेशन शनिवार कालिमाटीस्थित एफ टेन ब्यान्क्वेटमा सम्पन्न भएको छ ।
ढकालले दिए भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाइ बधाई
काठमाडौं, ११ फागुन । सियोल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित भएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकालले बधाई दिएका छन् ।
सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट हुने कारण छैन : खनाल
विराटनगर, ११ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट हुने कारण नरहेको दाबी गरेका छन् ।
नेकपासँगको सहकार्य टुट्न सक्छ : सहअध्यक्ष श्रेष्ठ
धादिङ, १० फागुन । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले के.पी. ओली नेतृत्वको सरकारले दुईबुँदे सहमति अनुरूप संविधान संशोधनको सन्दर्भमा कुनै कदम नचालेको तथा एकल सरकार जस्तो गरी
धैर्यतालाई कमजोरी नबुझ्न राजपाको चेतावनी
काठमाडौं, ८ फागुन । राजपा नेपालले संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता तत्काल पूरा गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महाधिवेशन अघि राजपाको छलफल तीव्र पार्दै
काठमाडौं, ८ फागुन । राजपा नेपालले फागुन १० गतेदेखि १३ गतेसम्म जनकपुरमा प्रदेश २ को प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र जिल्ला अध्यक्षमण्डलको बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश २ को सरकार कुनै पनि बेला परिवर्तन हुनसक्छ : नेपाल
रौतहट, ८ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले कुनै पनि बेला प्रदेश २ को सरकार उलट फेर हुन सक्ने बताएका छन् ।
विकासको जिम्मा मलाई दिनुहोस् : प्रधानमन्त्री
डडेलधुरा, ७ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासको जिम्मा आफूले लिने बताएका छन् ।
नेकपाको लुम्बिनी बन्द फिर्ता
बुटवल, ७ फागुन । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लुम्बिनी व्यूरोले फागुन ८ गते आह्वान गरेको लुम्बिनीका ७ जिल्ला बन्दको कार्यक्रम फिर्ता भएको जनाएको छ ।
मुलुक आज इतिहासकै संकटपूर्ण अवस्थामा पूगेको छ : डा.कोइराला
काठमाडौं, ७ फागुन । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले मुलुक इतिहासकै संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिम जाँदै
काठमाडौं, ७ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज र भोली सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा हुने कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने भएका छन् ।